२०० वर्षसम्म कोशी बाँधको चाबी भारतको हातमा,यस्तो छ कोशी सम्झौता ! - Myagdi Online
2627 पटक पढिएको
प्राकृतिक रूपमा कोशी नदी भारतीय भूमि बिहारका लागि दुःखको विषय भएपनि कृत्रिम रूपमा यसको सम्पूर्ण दुःख नेपालले मात्रै बेहोर्दै आएको छ । हरेक वर्ष तराईमा बाढी आउँदा कोशीले बिहारलाई नभएर नेपाललाई डुबाउँछ किनकि कोशी नदीमा बनेको ब्यारेज (बाँध) को सम्पूर्ण ताला चाबी भारतको हातमा छ ।
केही दिनयताको अविरल वर्षपछि तराईको अधिकांश भूभाग बाढीको चपेटामा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढीको क्षति कम गर्न र उद्धार तथा राहतको काम फटाफट गर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । तर दुईसय वर्षका लागि भारतको जिम्मा लगाइएको कोशी ब्यारेज प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा खुल्ने अवस्था छैन । कोशी ब्यारेजका ढोकाहरूले खुल्ने हो भने नेपालमा बाढीको क्षति स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ । तर त्यो सम्भावना छैन ।
नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौताबमोजिम कोशी ब्यारेजको शिलान्यास सन् १९५९ मा भएको थियो । नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उक्त ब्यारेजको शिलान्यास गरेका थिए । सन् १९६५ मा राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा उक्त ब्यारेज उद्घाटन गरेका थिए । कोशी ब्यारेजको सञ्चालनको जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा भारतको हातमा भएकोले हरेक वर्ष नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘एक सय ९९ वर्षको लागि कोशी सम्झौता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मित्रराष्ट्रलाई सहयोग गर्न नेपालले कोशी सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । तर अहिले सोही सम्झौता नेपालका लागि समस्या बनेको छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र राजा महेन्द्रको सक्रियतामा उक्त सम्झौता गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । कोशी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट भूमिसुधारमन्त्री महावीरशमशेर र भारतका तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाली भूमिमै बाँध निर्माण गरिएको भएपनि यसको सञ्चालन, रेखदेख लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारतको हातमा छ । कोशी ब्यारेजमा ५६ वटा ढोका छन् । बाढीले नेपाली क्षेत्र जलमग्न हुँदा पनि भारतले मुश्किलले ३० वटा मात्रै ढोका खोल्न गरेको छ ।‘बर्खामा ब्यारेजका सबै ढोका खोल्ने हो भने सिंगो बिहार डुब्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सोही कारणले भारतले सबै ढोका खोल्दैन । ढोका नखोल्दा नेपाल डुब्ने गरेको छ ।’ ढोका खोल्ने वा नखोल्ने सबै अधिकार भारतको हातमा छ । नेपाली पक्षको अविवेकी सम्झौताको कारणले हरेक वर्ष नेपालले कोशीको विपत्ति सहनुपरेको छ । सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको बीचमा ११ सय ७५ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सोही ब्यारेजले जोडेको छ । नेपालले ब्यारेजका कारण बनेको बाटोबाहेक अरू सुविधा लिन पाएको छैन । ब्यारेजमा पानी लैजानको लागि नेपालतर्फ एक सय २५ किलोमिटर तटबन्ध समेत निर्माण गरिएको छ ।
ब्यारेजले अझै थुप्रै वर्ष नेपाली पक्षलाई दुःख दिने श्रेष्ठ बताउँछन् । ३० मिटर अग्लो ब्यारेज बनाएको भएपनि अहिले चाहिँ बालुवाले पुर्दा उक्त ब्यारेजको गहिराइ मुश्किलले १५ मिटर रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।‘कोशी ब्यारेज कुनै बेला पनि भत्किन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘इन्जिनियरिङमा सिमेन्टबाट बनेको संरचनाको आयु ५० वर्ष मानिन्छ । अहिले कोशी व्यारेजको आयु समाप्त भइसकेको छ ।’
तर हिँउदको बेलामा सबै पानी भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । पूर्वी नहर होचो र पश्चिमी नहर अग्लो बनाइएको कारणले हिँउदको सम्पूर्ण पानी भारतले प्रयोग गर्छ । भारतले कोशीकै पानीको कारणले २ लाख ६१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्दै आएको छ । नेपालले २५ हजार हेक्टर भूमि पनि सिँचाइ गर्न पाएको छैन । बर्खायाममा त भारतले बिहार डुब्ने डरले सबै ढोका लगाउँछ । तर हिउँदमा भने सबै पानी बिहार लैजान्छ । पानीको बहाव खतराको संकेतभन्दा माथि पुग्दा समेत भारतले जम्मा २७ वटा ढोका खोलेको छ । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न भारतलाई अनुरोध गरेपनि भारतले ढोका खोलेको छैन ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पूर्वअध्यक्ष पदमलाल विश्वकर्माले कोशी सम्झौता नै गलत ढंगले भएको कारणले नेपालले दुःख पाउने गरेको बताए । ‘हिँउदमा सबै पानी भारतले लैजान्छ, बर्खामा ब्यारेजको ढोका थुन्छ, नेपाल डुब्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली भूमिमा ब्यारेज बनेको भएपनि संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारतले पाउनु दुःखद छ ।’ उनले कोशी सम्झौता खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रले अविवेकी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । तर तत्कालको अवस्थामा कोशी सम्झौता खारेज हुने अवस्था छैन । अझै एकसय वर्षभन्दा बढी उक्त सम्झौताको म्याद रहेको छ ।
पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय अहिले कोशी सम्झौता खारेज हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘पहिले कोशी सम्झौता भइहाल्यो, अहिले नेपालको कोही पनि नेताले कोशी सम्झौता खारेज गरौं भन्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘ब्यारेजको सञ्चालन गर्ने अधिकार भारतले पाउनु नै गलत हो ।’ उक्त सम्झौतामा १९६६ मा संशोधन समेत भएको उनले बताए । भारतकै प्रयोजनका लागि ब्यारेज बनाइएको समेत उनले बताए । ‘यो भारतकै प्रोजेक्ट हो, हिउँदमा पानी लैजान्छ, बर्खामा ब्यारेजको ढोका बन्द गर्छ,’ उनले भने, ‘कोशीमाथि बनेको ब्यारेज नेपालको हितमा छैन ।’
कोशी ब्यारजेको दुई माइलभन्दा बाहिर माछा मार्ने अधिकार नेपाललाई छ । कोशी सम्झौतालाई सरसर्ती केलाउँदा नेपालले पाएको अधिकार माछा मार्ने मात्रै हो । पानीको प्रयोग लगायतको सबै अधिकार भारतलाई दिइएको छ । कोशी सम्झौतामा भारतीय पक्षले कोशीमा बाँध निर्माण गर्न थालेको सूचना नेपाली पक्षलाई दिनेबित्तिकै भारतले बाँध निर्माणको अधिकार पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
ब्यारेज निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री नेपाली भूमिबाटै उत्खनन गर्ने अधिकार समेत भारतले पाएको थियो । पानी, विद्युत् लगायको नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार भारतीय पक्षलाई हुने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार भारतले ब्यारेज सञ्चालनको सबै जिम्मेवारी पाएको छ । कोशी ब्यारेजमा उत्पादन गरिने विद्युत् समेत नेपाल सरकारले भारतसँग किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा ‘जल अधिकारको मालिक भारत हुनेछ’ भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाण्डौ अप्रिल २५, १९५४ सन् १९५४ अप्रिलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधीराज्यको सरकार यस पछि सरकार भनिने र भारत सरकार यस पछी संघ भनिने । बीच सम्पन्न भयो । १. विषय वस्तु